Impulse Voltage uye Yazvino Yekuyedza System Vagadziri |China Impulse Voltage uye Yazvino Test System Suppliers & Fekitori
Impulse Voltage Test System inonyanya kushandiswa kuita yakazara wave wave impulse voltage bvunzo, kutema impulse bvunzo uye kushandura impulse bvunzo paHV zvishandiso sema transformer, surge arrester, insulators, bushings, capacitors, uye switch.Inogona kuburitsa yakajairwa mheni wave, switching wave, chopping wave ine wide range voltage uye simba.
Midziyo iyi inoenderana neyakasanganiswa wave yekuyedza inodiwa yeyakadzika-voltage simba rekugovera sisitimu SPD II chigadzirwa, inogonesa kugadzira impulse voltage (1.2/50μs) uye impulse yazvino (8/20μs), inoshandiswa pagiredhi III bvunzo uye kudzikisira voltage bvunzo. yeSPD uye zvikamu.
GDCY-12B Programmable Automatic Impulse Voltage Tester inonyanya kuenderana neTB/T 2653, GB/T 17627, GB/T 16927, GB14048, GB7251, GB/T 16935, IEC 61730, GB4706, JB3048 imwe chiyero uye JB3048 zvinodiwa.
GDCY yakatevedzana Impulse Voltage Jenareta inogona kuburitsa huwandu hwakasiyana hwevoltage uye simba kutevedzera waveform senge mheni kufambisa, mheni yakanyungudutswa wave, switching impulse zvichingodaro, inogonesa kuita dzakasiyana siyana dzekumanikidza bvunzo dzeyakakwira voltage midziyo yemagetsi, kushandira pamwe nekunyura. mudziyo unogona kuita steep wave bvunzo pane insulator (insulator tambo).
Iyo impulse yazvino jenareta iri kunyanya kugadzira mheni impulse current 8/20μs, yakakodzera kuyera yasara voltage yesurge arrester, varistors uye kumwe ongororo yesainzi.